The mfe ụzọ nyefee Data si Old iPhone ka New iPhone
Dị nnọọ nweta nkwalite gị ochie iPhone ka iPhone 6 (Plus), nanị na-ahụ na gị bara uru data, gụnyere kọntaktị, music, video, photos na ndị ọzọ ka na-rapaara na ochie iPhone? Echegbula. Ọ bụ a dịghị-brainer nyefee data si iPhone ka iPhone. Ị pụrụ ime ka ya nanị site na iji iTunes, iCloud ma ọ bụ ụfọdụ ndị ọzọ ngwá ọrụ.
Method 1: Nyefee faịlụ site Old iPhone ka New iPhone 6 (Plus) na MobileTrans
Method 2: Bugharịa Data si Old iPhone ka New iPhone 6 (Plus) na iTunes
Method 3: Nyefee Data si iPhone ka iPhone 6 (Plus) na iCloud
Comparison n'etiti MobileTrans, iTunes na iCloud
Method 1: nyefee faịlụ site Old iPhone ka New iPhone 6 (Plus) na 1 Pịa
Nyefee ochie iPhone ka iPhone 6 (Plus) na 1 click!
Nyefee ozi, kọntaktị, foto na kalenda si ochie iPhone ka iPhone 6 (Plus)
Copy ọdịyo na video ọhụrụ iPhone 6 (Plus), n'agbanyeghị ma ịzụta ha ma ọ bụ.
Weghachite iTunes nkwado ndabere na mpaghara nyefee ka iPhone 6 (Plus) effortlessly.
Na-arụ ọrụ n'ụzọ zuru okè na iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5s / 5c / 5 / 4S / 4 / 3GS na-agba ọsọ iOS 9/8/7/6/5.
Wụnye Wondershare MobileTrans na kọmputa gị. Jikọọ gị ochie iPhone na iPhone 6 (Plus) na kọmputa gị site na 2 USB cables. Mgbe na-agba ọsọ usoro ihe omume, ị ga-ahụ bụ isi window dị ka ndị a.
Nzọụkwụ 2. Họrọ ekwentị na ekwentị Nyefee
Ke isi window, ị pụrụ ịhụ na ekwentị ekwentị Nyefee atụmatụ. Pịa ya na ị ga-ahụ na windo n'okpuru. E wezụga na-ebufe ochie iPhone ka iPhone 6 (Plus), nke a software na-ahapụ gị nyefee ọdịnaya site iPhone 4 ka iPhone 5S, site iPhone 4 ka iPhone 5, si iPhone 5 ka iPhone 4, na ndị ọzọ. Ka ogologo oge gị abụọ iPhones na-akwado, ị nwere ike iji nke a software nyefee photos, music, video, kalenda, ozi na kọntaktị site na otu iPhone (iOS 9 akwado) ọzọ.
Nzọụkwụ 3. Malite ochie iPhone ka iPhone 6 (Plus) Data Nyefee
Dị nnọọ amalite data transfer site na ịpị Malite Copy. Na mmapụta dialog, ị nwere ike ịlele transfer ọganihu. Ọ na-ewe gị a nkeji ole na ole. Mgbe ọ bụ okokụre, data na gị ochie iPhone ga-agafere ọhụrụ gị iPhone.
Nzọụkwụ 1: Wụnye ọhụrụ iTunes na kọmputa. Ẹkedori ya.
Nzọụkwụ 2: Jiri ihe Apple eriri USB jikọọ gị ochie iPhone na kọmputa. iTunes ga chọpụta ya na-egosi na ya n'okpuru NGWAỌRỤ.
Nzọụkwụ 3: Pịa gị ochie iPhone aha na-egosi ya akara panel ke ziri ezi. Pịa Back Up Ugbu a nkwado ndabere na mpaghara data na gị ochie iPhone.
Nzọụkwụ 4: Mgbe nkwado ndabere na mpaghara ọganihu-agwụ, ị kwesịrị ị na Ikwupu gị ochie iPhone. Mgbe ahụ, jikọọ ọhụrụ gị iPhone.
Nzọụkwụ 5: Na ọhụrụ gị iPhone akara panel, pịa Weghachi ndabere .... Họrọ gị ochie iPhone si ndabere faịlụ ma weghachi ya na gị na ọhụrụ iPhone.
Ọ bụrụ na i guzobere ọhụrụ gị iPhone 6 (Plus) tupu, i kwesịrị enweta Setting> General> Tọgharia> Ihichapu All ọdịnaya na Setting. Mgbe ahụ, Malitegharịa ekwentị ma agbake iPhone (iOS 9 akwado). Mgbe ahụ, na-eso nzọụkwụ n'okpuru.
Nzọụkwụ 1: Tụgharịa na WiFi netwọk na gị ochie iPhone.
Nzọụkwụ 2: Gaa Ntọala> iCloud> Nchekwa & ndabere> gbanye iCloud ndabere> OK> Back ugbu a.
Nzọụkwụ 3: Tinye paswọọdụ gị Apple ID. Pịa Back Up Ugbu a.
Nzọụkwụ 4: Chere ruo mgbe ndabere usoro okokụre. Gbaa mbọ hụ na oge ahụ kpọmkwem nke i mere ka nkwado ndabere na mpaghara.
Nzọụkwụ 5: On ọhụrụ gị iPhone 6 (Plus), na-eso na ihuenyo ntụziaka ịrụcha ntọlite. Ị kwesịrị ị na họrọ otu asụsụ na mba, ma họrọ ma aka ebe Services ma ọ bụ. Echefukwala họrọ a Wi-Fi netwọk kwa.
Nzọụkwụ 6: Mgbe eru ihuenyo na-ekwu Set Up iPhone, ị kwesịrị enweta Weghachi si iCloud ndabere na họrọ ndabere faịlụ gị ochie ekwentị. Cheta Apple ID na paswọọdụ ị na-eji nnọọ ugbu a.
Nzọụkwụ 7: Mgbe ị rụchaa Iweghachi usoro, ọhụrụ gị iPhone 6 (Plus) ga-Malitegharịa ekwentị.
(The zụrụ ndị) (The zụrụ ndị)
(Nani na igwefoto Roll) (Nani na igwefoto Roll)
Dị nnọọ 10-nkeji ọrụ
Nyefee Android ma ọ bụ Nokia Symbian ka iPhone 6 (Plus)
Wepụ iTunes ndabere ka iPhone 6 (Plus)
Nyefee ndị na-abụghị zụrụ na zụrụ ọdịyo na video
Copy ngwaọrụ ọnọdụ, ngwa data, visual olu mail, zụrụ akwụkwọ, wdg
Ndabere ngwa, ngwa data, TV na-egosi, akwụkwọ, ngwaọrụ ntọala, n'ụlọ ihuenyo, wdg
Were oge dị ukwuu
Ọ bụghị nyefee Photo Library &-abụghị zụrụ music, fim, wdg
Wepụta nza nke oge na nkwado ma weghachite
Best 15 iPhone na iPad ngwa ọdịnala n'ihi iOS 9/8
Naghachi Ozi na iPhone
3 Ụzọ nkwado ndabere na mpaghara iPod aka maka iOS 9/8 ọjọọ
Olee otú ọsọ Up ngwaọrụ gị Mgbe iOS 9/8 Update
Ibufee ọdịnaya site na Android ka iPhone 6 (Plus)
> Resource> iPhone> 3 Ụzọ Nyefee Data si Old iPhone ka iPhone 6 / iPhone 6 Plus